Ny "drône" - Studio Sifaka - Actu, musique, conseils et débats pour les jeunes à Madagascar
Lasa fampiasa amin'ny fetim-pianakaviana ny "drône" matetika.
Na hialana voly na ampiasaina amin’ny asa, mirona amin’ny fampiasana "drône" ny olona ankehitriny. Anisan’izany ny fakana sary eny amin’ny habakabaka. Hijerena ny sarintany amin’ny toerana voatokana. Tsy afaka misidina fahatany anefa ny "drône" fa misy sokajy izy ireny ary misy haavo miala amin’ny tany hisidinany. Araho ato anaty tia vao ny momba izay.
Studio Sifaka · 2021 - 03 - 07 Tendance DRONE VM